Izindaba - I-Foregene igcwalise ngempumelelo ezezimali ze-Series A
I-Foregene igcwalise ngempumelelo ezezimali ze-Series A
NgoNovemba 20, 2020, iForegene Co, Ltd. neShenzhen Shangyang Asset Management Co, Ltd. (kamuva ezobizwa ngeShenzhen Shangyang) basayine isivumelwano sokutshala imali. AbakwaShenzhen Shangyang benze uchungechunge Ukutshalwa kwezimali okungamaRMB ayizigidi eziningana eForegene, kanti nokutshalwa kwemali kuqediwe muva nje.
I-Foregene Co., Ltd. yasungulwa ngo-Ephreli 2011. Le nkampani igxile kubuchwepheshe obusha be-R & D nobuchwepheshe bokuthuthukiswa komkhiqizo. Ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi be-Direct PCR obakhiwe yi-Foregene buhola imboni futhi bunamathemba amakhulu wokufaka isicelo emkhakheni wokuxilongwa kwamangqamuzana. Ngo-2016, u-Foregene wakhetha isikhungo sezinto zokwelashwa sesithathu saseChengdu Medical City, esifundeni saseWenjiang, eChengdu, futhi wasungula inkampani ephethwe ngokuphelele, iChengdu Forge Biotechnology Co., Ltd. (www.foreivd.com). Ukuguqulwa emkhakheni wokuxilongwa kwamangqamuzana. Inkampani ithole inani elithile lobunikazi bokuqanjwa kwasekhaya namalungelo obunikazi aphesheya. Ngokuya ngobuchwepheshe be-Direct PCR, i-Foregene isungule "i-15 system yokuphefumula yohlelo lokutholwa kwamagciwane". Ikhithi ingathola izinhlobo eziyi-15 zamagciwane e-sputum ngaphandle kwesidingo sokuhlanza i-nucleic acid esikhwehlelweni. Ngemuva kokuqinisekiswa ngezikhungo eziningana ezidumile zezokwelapha, ukusebenza kwekhithi kungcono kakhulu kunezindlela zendabuko zesiko lokukhwehlela. Ngokusebenza kahle, ifinyeza izinsuku zokuqala ezi-3 kuye kwezingu-5 ziye emahoreni ayi-1.5. Kulindeleke ukuthi ngemuva kokuthi umkhiqizo uvunyelwe ukuwukhangisa, uzokwakha ibhentshi elisha lokutholwa kwamagciwane emitholampilo emhlabeni wonke, unikeze isisekelo esisha sokwelashwa okuqondile kwezifo zokuphefumula, futhi usize ukuxazulula izindaba zokuphepha komphakathi zokuhlukunyezwa kwama-antibiotic kanye nokumelana namagciwane.
Ekuqaleni kuka-2020, ephendula ubhadane lwe-COVID-19, u-Foregene uqedele ukwakhiwa kwesethi ephelele yamakhithi amasha wokuthola i-coronavirus nucleic acid ngezinsuku ezi-4 nje kuphela, waba enye yezinkampani ezimbili zokuqala entshonalanga yeChina ukwenza lo mkhiqizo. Amakethi ka-Foregene awadingi ukuhlanza i-viral nucleic acid ukuthola i-coronavirus nucleic acid entsha. Kuze kube manje, ikhithi ithunyelwe emazweni amaningi kubandakanya iSpain, France, Iran, Brazil, Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan, njll.
IShenzhen Shangyang Asset Management Co., Ltd. yasungulwa ngoJanuwari 26, 2016. Yimenenja yesikhwama sezimali ezimele ebhaliswe neChina Fund Association. Selokhu lasungulwa ngo-2016, iqembu selibambe iqhaza ngokulandelana ekuphathweni kwezimali eziningi zamasheya kanye namaphrojekthi wesikhwama semali yokuzibandakanya, ngesilinganiso sokuphatha esiqoqayo esingaphezu kwezigidi ezi-2 zama-yuan. Izinkambu zokutshala imali zifaka phakathi ukukhiqizwa kwemithi, ukusatshalaliswa kwemithi, ezokuvakasha kwezamasiko nezindawo zokuthengisa amandla amasha, njll.
Ngokuya ngobuchwepheshe obuningi bokuhlonza amangqamuzana obufaka ubuchwepheshe be-Direct PCR, i-Foregene izoqhubeka nokwenza imikhiqizo yokuthola amagciwane amancane kanye nemikhiqizo esekelayo, futhi ilangazelela ukunikela ngobuhlakani namandla e-Foregene empilweni yabantu.